Raha tsapanao fa mitady any Prague, hanao ny hipsters hatao sy mankafy ny asa tanana labiera ary koa ny sakafo fitetezam-paritra. Azonao atao mihitsy aza maka ny fitetezam-paritra amin'ny labiera manam-pahaizana. Ho faly izy ireo ny hitondra anareo amin'ny Pivo (labiera) dia tsy tahaka hafa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Sakafo tsara indrindra Tours To Experience In Eoropa ” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)